Ranieri: Tottenham koobka way qaadi kartaa - BBC Somali
Ranieri: Tottenham koobka way qaadi kartaa
1 Maarso 2016
Image caption Claudio Ranieri waligii hor yaalnimada ma uusan hananin
Tababaraha kooxda Leicester Claudio Ranieri ayaa sheegay in kooxda Tottenham ay ku guulaysankarto horyaalnimada Ingiriiska.
Kooxda lagu naanayso Spurs ayaa labo dhibcood ka hoosaysa kooxda Leicester oo hogaaminaysa horyaalka Ingiriiska iyadoo ay dhimanyihiin 11 ciyaarood.
Tottenham ayaan kaalinta koobaad qabanin tan iyo wixii ka dambeeyay todobaadkii koobaad ee xili ciyaareedkii 2009-10.
Laakin tababarihii hore ee Chelsea Ranieri oo marti galinaya kooxda West Brom maalinta arbacada ah ayaa sheegay kooxda heer London ee Tottenham ay soo afjari karto 55-tii sano ee ay sugayeen hanashada horyaalnimada Ingiriiska.
Kooxda Tottenham ayaa ka dhisan dhinac kaste sida uu sheegay nin kaas Talyaaniga ah.
Spurs ayaa hogaanka qaban karta haddii ay ka badiyaan West Ham Arbacada waase haddii ay kooxda Foxes lagu magacaabo ay guul darro kala kulanto kooxda West Brom.
Kooxda Arsenal ayaa kaalinta saddexad ku jirta iyo saddex dhibcoodna laga koreeyo, kooxda Man City ayaa afar dhibcood laga horeeyaa iyada oo kaalinta afraad fadhida inkasta oo ay ay jirto ciyaar aysan wali dheelin.
Haddalka wuxuu ku soo gabogabeeyay in tartanka rasmiga ah ee hogaanku uu dhex yaalo Arsenal, Man city iyo Tottenham.